Yasekwa ngonyaka we-1996, i-Chengdu Mind Golden Card System Co, Ltd ngumvelisi ophambili ekuyileni, ekuphandeni, ekuthengiseni nasekuthengiseni amakhadi ehotele e-RFID, iMifare kunye nekhadi lokusondela, iRfid Label / izitikha, Amakhadi e-chip e-IC, umtya wemagnethi Amakhadi ehotele, ii-ID zamakhadi e-PVC, umfundi / ababhali abanxulumene noko kunye neemveliso zeIOT DTU / RTU zeMizi-mveliso.
Isiseko sethu semveliso i-Chengdu Mind Internet yezinto ze-Technology Co., Ltd.iseChengdu, entshona yeChina ngenqanaba lokuvelisa i-20,000 yeemitha zesikwere kunye ne-6 yemigca yemveliso ephuculweyo kunye ne-ISO9001, iROHS ifanelekile.
I-MIND yeyona arhente yodwa ye-ALIEN eNtshona ye-China kwaye sisebenza kwakhona kuvaliwe nge-NXP / IMPINJ / ATMEL / FUDAN iminyaka.
Isikhundla sethu sonyaka sisigidi se-150 seRfid amakhadi okusondela, amakhadi ayi-120 ezigidi ze-PVC kunye ne-IC chip amakhadi, i-Rfid ilebheli / isitikha kunye neethegi zeRfid (njengethegi ye-nfc, iqhosha lesitshixo, ibhanti yesandla, ithegi yokuhlamba iimpahla, ithegi yelaphu njlnjl.
Iimveliso zeNgqondo zisetyenziswa ngokubanzi kwinkqubo yokutshixa kwehotele, uLawulo lokuFikelela, ukuChongwa koMzimba, uPhononongo, ukuthuthwa, izinto zokusebenza, impahla kunye nezinye iinkalo.
Iimveliso ZENGQONDO ikakhulu zithunyelwa e-USA, Canada, i-Yurophu, i-Asiya kwaye idume ngobugcisa bokuqala beklasi, umgangatho ozinzileyo, ixabiso elikhuphisanayo, iphakheji entle kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza.
Sinikezela ngeenkonzo ze-OEM kunye nokubonelela nge-R & D kunye nenkxaso yezobuchwephesha. Wamkelekile iiodolo ezenziwe ngokwezifiso.
Kuzo zonke iimveliso esizivelisileyo, isiqinisekiso se-MIND ngexesha lokuhanjiswa kunye neminyaka emi-2 yewaranti.
Nika iimveliso ezisemgangathweni ukuhlangabezana nezicelo zabaxumi bethu
Yenza usetyenziso olukrelekrele lwekhadi elilumkileyo
Qhubeka uphucula isicelo se-smart card esenziwe
Inikwe elinye igama: Inkqubo yekhadi yegolide yeChengdu co. ltd, gxila kumashishini amakhadi e-RFID. Inkampani iya kwisakhiwo saseNanguang.
Ngenisa umgca wokuqala wemveliso eChengdu.
Yandisa kabini isikali sefektri, ukungenisa oomatshini abatsha kunye nomthamo wonyaka ukufikelela kwizigidi ezingama-80 zamakhadi.
Uthenge iofisi kumbindi wesixeko: 5A CBD-Dongfang plaza.
Hambisa kwiworkshop yokuzakhela ngokwakho: Ipaki yetekhnoloji ye-MIND, umzi-mveliso weemitha zesikwere ezingama-20000 ngesiqinisekiso se-ISO.
Gxila kuphuhliso lwamashishini aphesheya, iimveliso zeMIND zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-50 nakwimimandla kwihlabathi liphela.
Yazisa ngerfid oluzenzekelayo umgca wemveliso edityanisiweyo, yakha uvavanyo lwengqondo Yengqondo kunye neseti epheleleyo yezixhobo kubandakanya iVoyantic Tagformance pro RFID oomatshini.
I-MIND ikunye ne-China Mobile, iHuawei kunye neSichuan IOT, iseke ikomiti yesicelo se-NB IOT ukwakha ikhonkco lendalo kuphuhliso lwe-Sichuan IOT.
Gcina kwaye useke i-Chengdu MIND Zhongsha Technology Co., jolisa kwiimveliso ze-IOT R & D kunye nemveliso.
Yiba yi-1 SKA kuMazantsi-ntshona eAlibaba, uthathe inxaxheba kwi-5 expo yamazwe aphesheya eFrance / USA / Dubai / Singarpore / India.
Tyala imali kwiJamani yokuqala ejolise kwimarike Muehlbauer TAL15000 rfid inlay umgca wemveliso yokupakisha kwintshona ye China.